होसियार ! पानी चलाउन नजान्दा यस्तो हुन्छन् हात खुट्टा – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/होसियार ! पानी चलाउन नजान्दा यस्तो हुन्छन् हात खुट्टा
तर एक वर्ष पछि जर्मनीमा यहि प्रयोग फेरी भयो जुनमा नतिजा उल्टो आयो। नजिता आयो कि भिजेको हात र सुख्खा हातले काम गर्दा कुनै फरक हुँदैन। भिजेको खुट्टाले भुइँमा टेक्दा चिप्लिने बढी डर हुन्छ, कतै समात्न खोज्दा चिप्लो भएर समात्न सकिन्न। तर कम्तिमा ५ मिनेट पानीमा भिजेको हात वा खुट्टामा पर्ने चाउरीको कारण भने त्यस्तो चिप्लोपना कम हुन्छ। मार्क भिजेको चाउरी आफ्नै शरिर धान्न उपयोगी हुने ठान्छन्।